10 -ka Xubnood ee Wax -ku -oolnimada leh, Kordhinta Farriinta Iimaylka | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 11, 2021 Arbacada, Agoosto 11, 2021 Douglas Karr
In kasta oo iimaylku xoogaa horumar sameeyay dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo leh HTML, naqshad wax -ku -ool ah, iyo waxyaabo kale oo qaarkood, awoodda wadista ka dambaysa emaylka wax -ku -oolka ah ayaa weli ah nuqul fariin in aad qorto. Inta badan waan ka xumahay iimaylada aan ka helo shirkado aanan garanayn cidda ay yihiin, sababta ay iimaylka iigu soo direen, ama waxa ay iga filayaan inaan sameeyo marka xigta… iyaga.
Waxaan la shaqeynayaa macmiil hadda si aan nuqul ugu qoro dhowr ka mid ah emaylkooda otomaatiga ah… ogeysiiska rukunka, iimaylka soo -dhaweynta, emaylka dushiisa, emaylka dib -u -dejinta sirta, iwm. in aan daaha ka rogay waxyaabo ku filan maqaallada kale ee tartamaya si aan halkan ugu wadaago fikradayda iyo natiijadayda.
Macmiilkaygu wuxuu si dulqaad leh ii sugayay inaan dhammaystiro hawshan… aniga oo u malaynaya inaan furi doono dukumenti eray ah, aan qori lahaa nuqulkooda, oo aan siin lahaa kooxdooda horumarinta si ay u geliyaan barxaddooda. Taasi ma dhicin maxaa yeelay cunsur kasta waa inuu si fiican u fikiraa oo wuxuu u baahan yahay tan cilmi baaris ah. Macaamiilku ma laha dulqaad maalmahan shirkadaha waqtiga ku lumiya iyagoo riixaya isgaarsiinta aan qiimaha lahayn. Waxaan doonayay inaan hubiyo in qaab-dhismeedkayaga emaylladani ay ahaayeen kuwo joogto ah, si fiican looga fikiray, oo si habboon loo kala hormariyay.
Xasuusta dhinaca: Ma doonayo inaan la hadlo qaabka, naqshadeynta, ama Hagaajinta halkan… tani waxay aad ugu eg tahay nuqulka aad ku qorayso emayl kasta.
Qaybaha Nuqul Email Wax -ku -ool ah
Waxaa jira 10 qodob oo muhiim ah oo aan aqoonsaday si aan u qoro nuqul email wax ku ool ah. Ogsoonow in qaar ka mid ah ay yihiin ikhtiyaari, laakiin amarku wali waa muhiim maadaama macaamilka emaylku ku dhex wareego emaylka. Waxaan sidoo kale rabaa inaan hoos u dhigo dhererka emailka. Iimaylku waa inuu ahaadaa ilaa inta loo baahan yahay si loo gaaro hadafka isgaarsiinta… wax aan ka yarayn, maya. Taasi waxay ka dhigan tahay haddii ay tahay furaha sirta ah, adeegsaduhu wuxuu rabaa inuu ogaado waxa la sameeyo iyo sida loo sameeyo. Si kastaba ha noqotee, haddii ay tahay sheeko sheeko madadaalo leh, dhowr kun oo eray ayaa gabi ahaanba ku habboon inay ku madadaaliyaan macmiilkaaga. Macaamiisha wax dhib ah kuma qabaan in la guro ilaa inta xogtu si fiican u qoran tahay oo loo qaybiyey iskaanka iyo akhriska.
Line Subject - Khadka mawduucaagu waa wajiga ugu muhiimsan marka la go'aaminayo in macmiilku furi doono emaylkaaga iyo in kale. Qaar ka mid ah talooyin ku saabsan qorista khadadka mawduuca wax ku oolka ah:
Haddii iimaylkaagu yahay jawaab otomaatig ah (dhoofinta, sirta, iwm.), Kaliya sheeg taas. Tusaale: Codsiga dib -u -dejinta eraygaaga [madal].
Haddii iimaylkaagu yahay mid xog -ogaal ah, weydii su'aal, ku dar waji, codso qosol, ama xitaa ku dar emoji soo jiita dareenka emaylka. Tusaale: Maxay 85% u fashilmaan mashruuca isbadalka dhijitaalka ah?
Horjooge - nidaamyo iyo shirkado badan ayaan wax badan ka fikirin qoraalka hore. Kani waa qoraalka hordhaca ah ee macaamiisha emaylku ku muujiyaan hoosta mawduucaaga. Waxay badiyaa yihiin khadadka ugu horreeya ee waxyaabaha ku jira emaylka dhexdiisa, laakiin HTML iyo CSS waxaad si dhab ah u habayn kartaa qoraalka horudhaca ah oo ku dhex qari jirka emailka. Horudhaca wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku ballaariso khadka maadadaada oo aad fahanto dareenka akhristayaasha, oo ku sii dhiirrigeliya inay akhriyaan dhammaan emaylka. Tus. Ku sii wadida maadada mawduuca isbadalka dhijitaalka ah ee kore, madaxayga ayaa laga yaabaa Cilmi -baaristu waxay bixisay 3 -da sababood ee soo socda ee ku saabsan sababta mashaariicda is -beddelka dhijitaalka ah ay ugu fashilmaan ganacsiyada dhexdooda.
Furitaanka - Faqraddaada furitaanku waxay noqon kartaa horjoogahaaga ama waxaad ka faa'iideysan kartaa booska dheeraadka ah si aad ugu darto salaan, si buuxda u dejiso codka, oo aad u dhisto yoolka isgaarsiinta. Tusaale: Maqaalkan, waxaan ku wadaagi doonnaa cilmi -baaris dhammaystiran oo lagu sameeyay shirkadaha Fortune 500 oo tilmaamaya 3 sababood ee ugu badan ee mashaariicda is -beddelka dhijitaalka ah ay ku fashilmaan shirkadda dhexdeeda.
Mahadnaqay (ikhtiyaari) - Markaad dejiso codka, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad u mahadceliso akhristaha. Tusaale: Macaamiil ahaan, waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay in la wadaago macluumaadka sidan oo kale ah si kor loogu qaado qiimaha aan u keenno xiriirkeena. Waad ku mahadsan tahay kaalmayntaada [shirkadda].
jirka - Xushmee waqtiga dadka adiga oo si kooban oo hal abuur leh u siiya macluumaadka si aad u gaarto hadafka aad kor ku sheegtay. Halkan waxaa ah dhowr talooyin ...
Ka faa'iidayso qaabaynta si hagar la'aan ah oo waxtar leh. Dadku waxay akhriyaan emayl badan aaladaha mobilada. Waxaa laga yaabaa inay rabaan inay ku dhex wareegaan iimaylka marka hore oo ay akhriyaan cinwaannada, ka dibna si qoto dheer u qod nuxurka. Cinwaanno fudud, ereyo geesinimo leh, iyo dhibco rasaas waa inay ku filnaadaan si ay uga caawiyaan inay iska baaraan oo ay diiradda saaraan nuqulka ay xiiseynayaan.
Ka faa'iidayso muuqaallo kale si hagar la'aan ah oo waxtar leh. Sawir -gacmeedku wuxuu ka caawiyaa macaamiisha inay fahmaan oo ay hayaan macluumaadka aad bixinayso dhakhso ah intii akhrinta qoraalka. Ka fikir inaad fiiriso jaantuska halkii aad ka akhrin lahayd qodobbada iyo qiimaha… shaxda ayaa aad uga waxtar badan. Sawirada waa inaysan waligood noqon wax carqaladeeya, mana aha wax aan macquul ahayn, in kastoo. Ma doonayno inaan luminno waqtiga akhristayaasha.
Ficil ama Dalab (ikhtiyaari) - U sheeg isticmaalaha waxa uu samaynayo, sababta uu u qabanayo, iyo goorta uu samaynayo. Waxaan aad ugu talin lahaa inaad isticmaasho badhan nooc ka mid ah oo amarka ku yaal. Tusaale: Haddii aad qorsheynayso mashruucaaga isbeddelka dhijitaalka ah ee xiga, jadwal kulan wadatashi oo hordhac ah oo lacag la'aan ah hadda. [Badhanka Jadwalka]
Jawaab-celinta (ikhtiyaari) - Weydii oo bixi hab aad ku bixin karto warcelin. Macaamiishaadu waxay jecel yihiin in la dhegeysto oo waxaa laga yaabaa inay jirto fursad ganacsi markaad weydiisato jawaab -celintooda. Tusaale: Ma u aragtay macluumaadkan mid qiimo leh? Ma jiraa mowduuc kale oo aad jeceshahay in aan baarno oo aan ku siinno macluumaad? Ka jawaab iimaylkan oo noo sheeg!
Resources (ikhtiyaari) - bixi macluumaad dheeri ah ama beddel ah oo taageera isgaarsiinta. Macluumaadkani waa inuu ahaadaa mid ku habboon yoolka isgaarsiinta. Xaaladdan kor ku xusan, waxay noqon kartaa dhejisyo dheeraad ah oo khuseeya baloogyada aad samaysay, waxoogaa maqaallo ah oo ku saabsan mawduuca, ama ilaha dhabta ah ee lagu xusay maqaalka.
Connect - Bixi hababka isgaarsiinta (shabakadda, bulshada, cinwaanka, taleefanka, iwm.). U sheeg dadka meesha iyo sida ay kuugu xiriiri karaan adiga ama shirkaddaada warbaahinta bulshada, balooggaaga, lambarka taleefankaaga, ama xitaa goobtaada jireed.
Xasuusin -U sheeg dadka sida ay isu qoreen oo u siiyaan hab aad uga baxdo ama aad u beddesho doorbidkaaga isgaarsiinta. Waxaad la yaabi doontaa inta emayl ee dadku doorteen, markaa xusuusi sida loogu daray liiska emaylkaaga! Tusaale: Macmiil ahaan, waxaa lagugu doortay wargeysyadan. Haddii aad jeceshahay inaad ka baxdo ama cusboonaysiiso doorbidyadaada isgaarsiinta, guji halkan.
Joogtayntu waa furaha qaab -dhismeedka emaylkaaga iyo nuqulkaaga, markaa u deji qaab -dhismeedka mid kasta oo ka mid ah emaylkaaga si ay macaamiishu u aqoonsadaan una qiimeeyaan mid kasta. Markaad dejiso filashooyinka oo xitaa aad dhaafto, macaamiishaadu way furi doonaan, gujin doonaan, waxayna qaadi doonaan tallaabo aad uga sii badan. Tani waxay u horseedi doontaa ka -qaybgal wanaagsan, helitaan, iyo haynta macaamiishaada.
Tags: emailjirka emailkaemayl ugu dir ficilnuqul emaylemail nuqul qoraal ahemaylka ctahawlgelinta emaylkafarriinta emailkaqaabeynta emaylkagaraafyada emailkacinwaanka emailkaEmail Marketingfuritaanka emailkajawaab emailhaynta emaylkasalaan emailqaybaha emailkakhadka mawduuca emaylkahordhaca